Khabiirka Cimilada wuxuu soo saaraa Aaladda Shabakada Iskuduwaha ee Super
ParseHub waa mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee caanka ah. Iyada oo this scrush iyo bogga ugu dambeeyey webka, aad si sahlan u soo saari kartaa xogta iyo kaliya u baahan tahay inaad gujiso website-ka la doonayo ama blog si aad u hesho si buuxda ama qayb ka soo bixisay. Waa ammaan inaad xusuusatid in ParseHub ay tahay mid sahlan oo sahlan in la isticmaalo barnaamijka kaydinta xogta - phon bin. Waxaa jira barayaal badan oo nalaga rabo in aan bilowno aasaaska barnaamijkan. Markaa kadib waxaan u dhaqaaqi karnaa mashaariicda horumarinta shabakadda websaydka iyada oo aan wax dhibaato ah. Sidoo kale waa sahlan tahay inaad bilowdo qorshe bilaash ah oo aad u guurto heerarka caadiga ah ama mihnadaha sida shuruudahaaga. Qaybta ugu wanaagsani waa taageerada macaamiisha ee qalabkani waa mid aad u fiican, waxaana lagu taliyay tiro badan oo ganacsato ah.
Ka saar wixii xog ah ee shabakadda
Waan ognahay in Weyne Weyne uu leeyahay macluumaad iyo macluumaad oo uu qof kastaa rabo inuu galo oo kaliya dhowr jeer . Waxaanu wajahaynaa dhibaatooyin marka la qorayo, la socoshada iyo martigalinta waraaqaha khaaska ah ee webka. Iyadoo ParseHub, waxaad ku fikiri kartaa mustaqbalka qof kasto uu waydiin karo su'aalo ku saabsan sida loo abaabulo ama loo dhiso xogta adduunka iyada oo aan wax arrin ah. ParseHub waxay la timid nidaam taageero oo sahlan oo wax ku ool ah, waana barnaamij dhamaystiran oo xog-ururin ah oo fudud oo la isticmaalo..Waxaa intaa dheer, waa mid dabacsan, awood leh oo sahlan in la isticmaalo. Marka la tirtiro ama la tirtiro caqabadaha waaweyn ama dhibaatooyinka ururinta xogta, waxaad ku qaadan kartaa wakhti dheeraad ah fikradaha waxtar leh, muuqaal qurxoon, iyo urur xogeed halkii laga saari lahaa xogta webka. Waxaad sidoo kale ka dhigi kartaa go'aano ganacsi oo muhiim ah barnaamijkan si haboon.
ParseHub oo loogu talagalay horumarinta:
Dadka farsamada maskaxda leh sida kuwa naqshadayaasha webka, kuwa horumariya, iyo barnaamijyadaba, ParseHub waxay si buuxda u xakameyneysaa sida loo badalayo, qaabeynta iyo xulashada waxyaabaha kala duwan si ay u sameeyaan ' t waa in ay mar kale ku qoraan codka cirifka shabakada adag. Waxaad si fudud u adeegsan kartaa barnaamijkan oo aad maareyn kartid dhammaan khariidadahaaga interacting, website-yada la xaqiijiyay, hoos u dhicid, waraaqo aan xadad lahayn iyo foomamka internetka.
Waa inaad farta gashaa oo aad gujisaa bogga internetka ee aad doonayso inaad soo qaadato xogta oo aad u ogolaato ParseHub inta kale. Barnaamijkani wuxuu si sahal ah u qiyaasi doonaa xogta iyo waxyaabaha kale ee ku jira internetka wuxuuna kuu qabanqaabin doonaa oo idin dhisi doonaa adiga. Haddii aad rabto inaad qorto qoraalka adigoo isticmaalaya ereyo joogto ah, ParseHub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad gasho jadwalka CSS si aad adigu wax uga beddeli karto sifooyinka udub iyada oo aan wax dhibaato ah. Hel wax xog ah oo ka socda boqollaal ilaa kun oo bog ah si fudud. Kaliya geli cinwaanka URL-yada iyo ereyada muhiimka ah, ParseHub si toos ah ayey u gutaan hawsheeda.